Aiza no misintona ny tsipika +1000 ho an'ny Photoshop maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
Miasa miaraka amin'ny lamba Photoshop dia mahazatra ho an'ny matihanina maro. Izy ireo no mamela hanome ny zava-misy sy voajanahary kokoa ny sary ary mahatonga azy ireo hiova mba hisarika ny sain'izay mandinika azy. Noho izany, ny fananana repertoire lehibe dia afaka manamora ny asanao, satria ho hitanao foana ilay tadiavinao na ilaintsika.
Ok izao Ahoana no ahazoana miloko maherin'ny 1000 amin'ny Photoshop? Fa mora toy ny manohy mamaky ity lahatsoratra ity satria homenay anao izy ireo, tsy 1001 fotsiny, fa maro hafa.
1 Inona avy ireo sary Photoshop
2 Aiza no misintona ny lamba ho an'ny Photoshop
2.1 TexturePalace, ny tsara indrindra amin'ny lamba Photoshop
2.2 Teknolojia stock maimaimpoana
2.6 Sary Public Domain
2.7 Mayang's Free Texture, ny tsara indrindra amin'ny textures Photoshop
2.9 Teknolojia vaovao
2.10 Very ary nalaina
Inona avy ireo sary Photoshop
Alohan'ny hilazanao aminao hoe aiza no hampidina azy ireo, andao ataontsika mazava tsara hoe inona ireo firafitr'ireo Photoshop. Ireo dia sosona izay ampidirina ao amin'ireo sary iarahanao miasa amin'ny alàlan'ny programa Photoshop. Inona no azonao avy amin'izany? Mamorona tasy, volavolan-taratasy, hazo, sns ... Amin'ny teny hafa, hanome zava-misy an'io sary io ianao, manao azy ho toy ny zavatra hafa, na maka tahaka fa azonao atao ny manohina sy mahatsapa izany fahatsapana ateraky ny singa izany.
Aiza no misintona ny lamba ho an'ny Photoshop
Ankehitriny rehefa fantatrao tsara ny atao hoe Photoshop textures, azonay atao ve ny manampy anao hahafantatra hoe aiza no ahitanao mihoatra ny 1000 amin'izy ireo? Tena mora be izany, eto ny toerana anaovana azy:
TexturePalace, ny tsara indrindra amin'ny lamba Photoshop
Ity pejy ity dia ny "Holy Grail" ho an'ny maro, Harena tsy fantatra ary, na izany aza, irery irery dia efa manana tranomboky mirakitra firafitra mihoatra ny 1000 ho an'ny Photoshop ianao.
Izy rehetra dia azo alaina maimaim-poana ary afaka mahita sokajy tena samihafa ianao, avy amin'ny boky, metaly, natiora, taratasy, lamba ... Handany fotoana be dia be ianao amin'ny fitetezana ny tranonkala, ary tsy mahagaga, satria ho hitanao ny zava-drehetra. . Ho fanampin'izany, mazàna dia mavitrika be izy ireo ary matetika kokoa ny firakotra, ka tsy ho lany andro ianao.
Teknolojia stock maimaimpoana
Iray amin'ireo tranonkala miaraka amin'i habe lehibe indrindra amin'ny textures ho an'ny Photoshop dia ity. Ao anatin'izany no ahitanao karazana maro, fa ambonin'izany rehetra izany dia mifantoka amin'ireo voajanahary na miaraka amin'ny rindrina vaky ary misy vokany Grunge.
Midika ve izany fa tsy misy sokajy hafa? Tsy latsa-danja kokoa, fa azo atao izany, raha mampitaha ireo fizarana teo aloha, dia kely kokoa no azony. Saingy, mbola hanana safidy mihoatra ny 1000 hisafidianana ianao.
Freepik fantatsika fa banky sary maimaimpoana sy maimaim-poana izany fa generalist. Na izany aza, dia manana safidy vitsivitsy ho an'ny textures ho an'ny Photoshop izay mety ho tsara raha andramana, satria mety hahaliana tokoa.
Saika ny rehetra hamela anao hisintona ny PSD izy ireo, zavatra tena tsara satria, raha mbola avelako izy io dia azonao atao ny mamerina sy manova azy ireo araka ny itiavanao azy (fa manana fototra efa voaomana).
Ity tranonkala ity dia iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny textures ho an'ny Photoshop. Ny hany angatahin'izy ireo dia ny fisoratanao anarana maimaimpoana mba hampidinana ireo rakitra lehibe indrindra. Mazava ho azy, ho an'ireo goavambe dia mila kaonty voaloa premium ianao.
Inona no ho hitanao ato amin'ity tranonkala ity? Voalohany, a fanasokajiana ny firafitra amin'ny sokajy sy habe. Miankina amin'izay ilainao na tadiavinao dia azonao antoka ny miditra isaky ny fizarana ary mahita ireo safidy natolony anao, izay efa nolazainay taminao fa maro.
Raha ny zavatra tadiavinao dia ny zava-misy voajanahary sy ny endrika voajanahary ary mamorona vokatra ivelany, eto dia ho hitanao maromaro. Manana ny zava-drehetra izy ireo avy amin'ny biby, kristaly, ranomandry sy lanezy, firavaka, loko, zavamaniry ...
Raha ampitahaina amin'ireo tranokala hafa dia mety ho mahantra kokoa izy io, saingy manakaiky ny haavon'ny pejy lehibe hafa, Ary ny zavatra tsara momba azy dia hoe, rehefa manam-pahaizana manokana ianao dia hahita bebe kokoa noho ny amin'ireo tranonkala hafa amin'ireo sokajy ireo.
Araka ny tondroin'ilay anarana, eto ianao dia hahita sary am-paosy marobe, izay midika fa ho afaka hampiasa azy ireo manokana sy ara-barotra ianao, tsy mila misoratra anarana hampidina azy ireo.
Betsaka ny karazana sary, fa ny tena marina dia manana fizarana manokana ho an'ny firafitra ary eto ianao dia ho afaka hahita sary maro karazana. Mazava ho azy, avy amin'ny zavatra hitantsika, manana karazany maro izy, fa indrindra ny lamba sy ny natiora (na dia azonao atao aza ny mahita ny zava-drehetra raha manokana fotoana ianao).
Mayang's Free Texture, ny tsara indrindra amin'ny textures Photoshop
Ary tsy misy arivo, fa safidy efatra arivo izay omenay anao etsy ambany, izay hahatonga anao hanana tranokala hahitanao ny zava-drehetra.
Ny endriny dia tsy hoe tena maoderina na ankehitriny, fa ny tena zava-dehibe dia ireo firafitra an'arivony ho an'ny Photoshop izay ho hitanao ato amin'ity pejy ity. Ary efa mampitandrina anao izahay fa misy maro. Mazava ho azy, mampitandrina anao izahay fa maty ny tranokala saingy manantena izahay fa ho voavaha tsy ho ela.
Safidy vaovao hafa hisintomana ny lamba ho an'ny Photoshop maimaim-poana. Ny zavatra tsara indrindra dia tsy mila fisoratana anarana ianao ary ho hitanao ny zava-drehetra. Mazava ho azy, tsidiho ny ampahany amin'ny biby satria gaga ny sasany.
Mitandrema amin'ity iray ity. Iray amin'ireo tranokala tsara tarehy indrindra, fa manana ampahany maimaim-poana sy ampaham-bola. Na dia izany aza, amporisihinay izy io satria heverinay fa ny faritra maimaim-poana dia misy izay mendrika izany ary tsy ho hitanao any amin'ny toerana hafa.
Ambonin'izany rehetra izany, dia miavaka amin'ny firafitra sy vakoka tena izy.
Very ary nalaina
Hanolotra anao voafidy somary voafetra kokoa noho ireo hitantsika teo aloha io, ho fanampin'ny fakana fanahy anao amin'ny firafitra vitsivitsy ho an'ny Photoshop avy amin'ny toerana karama hafa, koa mitandrema mba tsy ho raiki-pitia amin'ny iray izay tsy maimaim-poana.
Azonao atao mahita karazana maro, fa tena zava-misy ny ankamaroany.
Safidy iray hafa anananao dia ity, izay ahitanao fikambanana misy sokajy izay hanamora kokoa anao hahita ny zavatra tadiavinao. Azonao atao koa ny misintona azy ireo tsy mila misoratra anarana, ary misy vahaolana avo lenta, izay manampy amin'ny fanomezana kalitao tsara indrindra ho an'ireo tetikasanao.
Miaraka amin'ireo safidy rehetra nomenay anao, azonay antoka fa hanana endrika mihoatra ny 1000 ho an'ny Photoshop vonona ny hisintona ianao. Ankehitriny, mamporisika anao izahay mba handanianao ny fotoananao hahafahana mandinika ireo tranonkala rehetra sy misintona ireo izay mety hahaliana anao amin'ny asanao na amin'ny sehatra manokana Ary aza adino ny mitahiry ireo tranokala ireo hiditra amin'ny fotoana tianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Aiza no misintona ny sary +1000 ho an'ny Photoshop